Nhau - UV LED KUSIMBISA DZIDZIDZO TECHNOLOGY-UV-C LED Tekinoroji - Iyo Inotevera Revolution?
Ultraviolet (UV) disinfection tekinoroji anga ari mutambi wenyanzvi mukurapa kwemvura uye nemweya mukati memakumi maviri emakore apfuura, nekuda kwechimwe chikamu kugona kwayo kurapa pasina kushandisa makemikari anokuvadza.
UV inomiririra wavelengths iyo inowira pakati peinoonekwa mwenje uye x-ray pane yemagetsi girazi. Iyo UV renji inogona kupatsanurwa kuve UV-A, UV-B, UV-C, uye Vacuum-UV. Chikamu cheUV-C chinomiririra wavelengths kubva ku200 nm - 280 nm, iyo wavelength inoshandiswa mune yedu LED disinfection zvigadzirwa.
UV-C mafotoni anopinda mumaseru uye nekukuvadza iyo nucleic acid, ichivapa kutadza kubereka, kana microbiologically isingashande. Izvi zvinoitika mune zvakasikwa; zuva rinoburitsa mwaranzi yeUV inoita nenzira iyi.
Pakutonhorera, isu tinoshandisa Chiedza Chinoburitsa MaDiode (maLED) kugadzira huwandu hwakawanda hwe UV-C mafotoni. Iwo maranzi anotungamirwa kumavirusi, mabhakitiriya uye zvimwe zvipembenene mukati memvura nemhepo, kana pane nzvimbo kuti ape utachiona husingakuvadzi mumasekondi.
Zvakanyanya nenzira imwecheteyo iyo maLED akachinja maindasitiri ekuratidzira uye ekuvhenekesa, UV-C tekinoroji yeUS set yakagadzirirwa kupa mitsva, yakavandudzwa, uye yakagadziriswa mhinduro mune zvese mweya uye kurapwa kwemvura. Dual barriers, post-filtration dziviriro yave kuwanikwa iko uko ma mercury-based system anga asingambove akambofungidzirwa kushandiswa.
Aya maLED anogona kuzobatanidzwa mune akasiyana masisitimu ekurapa mvura, mhepo, uye nzvimbo. Aya masisitimu anoshandawo neakagadzika eLED kuti aparadzire kupisa uye nekuvandudza mashandiro eiyo disinfection maitiro.